5 cách kết nối iPhone với các hãng tivi chi tiết mà bạn cần phải biết | Muasalebang - Muasalebang
5 cách kết nối iPhone với các hãng tivi chi tiết mà bạn cần phải biết | Muasalebang
Đang Đọc: 5 cách kết nối iPhone với các hãng tivi chi tiết mà bạn cần phải biết | Muasalebang in Muasalebang
1 Ufuna ukuthuthukisa okubukwayo nomculo ngokuxhuma kusuka ku-iPhone yakho kuya ku-TV yesikrini esibanzi ukuze ukwandise ukukhanga. Umshini Oluhlaza uzokwethula kuzo zonke izindlela zokuxhuma i-iPhone nemikhiqizo ye-TV ngemininingwane eminingi!
1.1 kuqalaUkusebenzisa izinhlelo zokusebenza zesofthiwe kumafoni we-iPhone
1.1.1 Samsung Apps – Smart View
1.1.2 Ukusetshenziswa kwe-TCL – MagiConnect
1.1.3 I-Panasonic App – I-Panasonic Remote 2
1.1.4 Uhlelo lokusebenza lwe-LG – LG TV Plus
1.2 2Uyixhuma kanjani i-iPhone ku-TV usebenzisa i-AirPlay (ye-iPhone 4 noma eyakamuva)
1.3 3Xhuma i-iPhone ku-TV nge-WiFi
1.4 4Ukusebenzisa ikhebula le-HDMI
1.5 4Sebenzisa uxhumano lwe-Analog (etholakalayo ku-iPhone 3G nangaphezulu)
Ufuna ukuthuthukisa okubukwayo nomculo ngokuxhuma kusuka ku-iPhone yakho kuya ku-TV yesikrini esibanzi ukuze ukwandise ukukhanga. Umshini Oluhlaza uzokwethula kuzo zonke izindlela zokuxhuma i-iPhone nemikhiqizo ye-TV ngemininingwane eminingi!
Izinzuzo zokuxhuma i-iPhone ku-TV:
Ungakwazi ukuyilawula ukude ngaphandle kokusebenzisa izilawuli ezivamile njengangaphambili.
Ungasakaza okuqukethwe kusuka kumakhalekhukhwini wakho kuya ku-TV yakho ukuze ujabulele osayizi bezithombe abakhudlwana, umculo onomsindo omkhulu, nokuthokoza okuthuthukisiwe.
Qaphela: Nokho, lolu xhumo lusetshenziselwa kuphela i-Smart TV ne-Internet TV.
kuqalaUkusebenzisa izinhlelo zokusebenza zesofthiwe kumafoni we-iPhone
Uma usebenzisa i-Smart TV, i-TV ye-inthanethi esekela isici sokulawula i-TV ngefoni, ngalezi zinhlelo zokusebenza ungadlulisela izithombe, umculo, amamuvi ukusuka ku-iPhone kuya ku-TV ngaphandle kwezintambo.
Samsung Apps – Smart View
Uhlelo oluhlakaniphile nolukhululekile olukuvumela ukuthi wabelane kalula futhi ulawule i-Samsung TV ngocingo lwakho usebenzisa umthombo we-wifi ofanayo ne-TV (Qaphela: i-iPhone OS I-iOS 7 nangaphezulu Uhlelo lokusebenza lwe-Samsung Smart View lungafakwa kuphela).
Isinyathelo 1: Landa uhlelo lokusebenza lwe-Smart View ku-iPhone yakho.
Isinyathelo sesi-2: Ngemva kokufaka uhlelo lokusebenza, nikeza uhlelo lokusebenza imvume yokufinyelela ku-vault yezithombe ze-iPhone yakho (kuyadingeka) ngokulandela le miyalo:
Ku-iPhone, uya ku Ukusetha.
Nika amandla imvume yokufinyelela izithombe.
Isinyathelo sesi-3: Okulandelayo, vula uhlelo lokusebenza lwe-Smart View bese ukhetha Xhuma i-TV ukuze uxhume ku-TV.
Isinyathelo sesi-4: I-TV izokwenza usesho. Bese ukhetha igama le-TV ofuna ukuxhuma kuyo.
Isinyathelo sesi-5: Iphasiwedi izovezwa ku-TV. Kamuva faka iphasiwedi lokhu ocingweni.
Isinyathelo sesi-6: Ngemva kokuxhumana ngempumelelo, uchofoza isithonjana isithombe esikude.
Isinyathelo sesi-7: Ucingo luzoshintshela kusixhumi esibonakalayo sokulawula i-TV ngezici ezifana nalezi: Ukwandisa noma ukunciphisa ivolumu, shintsha amashaneli, vula isixhumi esibonakalayo sasekhaya (ikhasi lasekhaya), faka izinhlamvu nezinombolo.
Xem Thêm Tivi Led LG 65UN7000PTA 65 inch 4K-Ultra HD Giá Rẻ | Muasalebang
Ukusetshenziswa kwe-TCL – MagiConnect
Uhlelo lokusebenza oluhlakaniphile nolwamahhala olukuvumela ukuthi wabelane kalula futhi ulawule i-TCL TV ngocingo usebenzisa umthombo we-wifi ofanayo nowe-TV.
Isinyathelo 1: Landa futhi ufake i-MagiConnect ku-iPhone yakho.
Isinyathelo sesi-2: Vula uhlelo lwe-MagiConnect, swayipha isikrini ukuze ufake uhlelo lokusebenza.
Isinyathelo sesi-3: Khetha isithonjana se-TV ku ekhoneni eliphezulu kwesokunxele.
Isinyathelo sesi-4: Ifoni izoba thola ngokuzenzakalelayo I-TV ingaxhumeka (uma ikhaya lakho line-TV eyodwa ye-TCL kuphela, kulesi sinyathelo ifoni izoxhuma ngokuzenzakalelayo, uma kunama-TV amaningi, bese ukhetha i-TV ofuna ukuyixhuma).
Isinyathelo sesi-5: Chofoza inkinobho enesithombe umbhobho obomvu ukuvula ikhonsoli ye-TV. Ungasebenzisa ifoni yakho ukulawula i-TV kakade.
I-Panasonic App – I-Panasonic Remote 2
Uhlelo lokusebenza lokulawula i-TV ngocingo olwakhiwe yiPanasonic, olukuvumela ukuthi wabelane futhi ulawule kalula I-TV ye-Panasonic.
Isinyathelo 1: Iya esitolo sezinhlelo zokusebenza ze-iPhone yakho bese ulanda uhlelo lokusebenza lwe-Panasonic Remote 2.
Isinyathelo sesi-2: Efonini yakho, yiya ku Ukusetha > Isilawuli kude sePanasonic 2 > Vula imodi evumela uhlelo lokusebenza ukufinyelela ama-albhamu wakho wezithombe.
Isinyathelo sesi-3: Vula uhlelo lokusebenza lwe-Panasonic Remote 2 > Khetha Idivayisi > Khetha i-TV ofuna ukuyixhuma.
Uhlelo lokusebenza lwe-LG – LG TV Plus
Lolu uhlelo lokusebenza olwakhululwa ngemva kwe-LG TV Remote, futhi lusetshenziselwa kuphela amamodeli e-LG Smart TV ane-WebOS interface futhi akhululwa kusukela ngo-2014 kuye phambili.
Le ndlela isetshenziswa kuphela kuma-LG Smart TV anesistimu yokusebenza ye-WebOS, i-TV ngokuvamile ngeke isebenze, futhi uma kuyi-LG Smart TVs enohlelo lokusebenza lwe-NetCast, usebenzisa olunye uhlelo lokusebenza olubizwa ngokuthi. Isilawuli kude se-LG TV.
I-iPhone OS I-iOS 6.1 noma kamuva, uhlelo lwe-LG TV Plus lungafakwa.
Xem Thêm Cách cài đặt chế độ chơi game trên tivi Samsung | Muasalebang
Isinyathelo 1: Landa futhi ufake i-LG TV Plus efonini yakho.
Isinyathelo sesi-2: Vula uhlelo lokusebenza lwe-LG TV Plus > khetha QALA.
Isinyathelo sesi-3: Uhlelo lokusebenza luzobonisa amagama athile kumsebenzisi > khetha YAMUKELA.
Isinyathelo sesi-4: Uhlelo lokusebenza luzocinga ama-LG TV angaxhunywa > owakhetha ku-TV yakho.
Isinyathelo sesi-5: Ngalesi sikhathi, i-TV izoveza iphasiwedi> faka le phasiwedi ocingweni futhi i-TV izoxhuma ngempumelelo.
Isinyathelo sesi-6: I-TV izoveza umyalezo obuza ukuthi uyaluvumela yini uhlelo lokusebenza ukuthi lufinyelele esitolo sakho sezithombe (kusetshenziswa uma ufuna ukudlulisa izithombe ku-TV) > khetha KULUNGILE ukuvuma.
Ngemva kwalokho, usungakwazi kakade ukusebenzisa ifoni yakho ukulawula i-TV.
2Uyixhuma kanjani i-iPhone ku-TV usebenzisa i-AirPlay (ye-iPhone 4 noma eyakamuva)
I-AirPlay iyindlela yokudlulisa engenantambo eyakhiwe yi-Apple, esetshenziselwa ukuxhuma i-iPhone ku-TV nge-wifi ngaphandle kokusebenzisa izintambo (Efana ne-Miracast evame ukusetshenziswa kumafoni we-Android).
Ukuze uxhume i-iPhone yakho ku-TV yakho nge-AirPlay, udinga idivayisi ebizwa nge-Apple TV noma i-Android TV esekela isici se-Air Screen.
I-Apple TV iyibhokisi le-Apple set-top, elixhunywe ku-TV ngembobo ye-HDMI. Uma i-TV evamile ixhuma ku-Apple TV, leyo TV iba i-smart tv, ingaxhuma kunethiwekhi futhi ifinyelele izinhlelo zokusebenza. Ungathenga i-Apple TV ngentengo cishe 1 million kuya ku-5 millionkuye ngenguqulo nenkumbulo.
Ungazidlulisela kanjani izithombe zisuka ku-iPhone ziye ku-TV usebenzisa i-AirPlay
Isinyathelo 1: Xhuma i-Apple TV ku-TV ngekhebula le-HDMI.
Ku-TV, khetha okokufaka kwedatha ye-TV ngokucindezela inkinobho . UMTHOMBOifindo INPUT noma inkinobho enesithonjana somcibisholo, bese ukhetha ku-TV I-HDMI.
Isinyathelo sesi-2: Ngalesi sikhathi, ukusebenzelana okuyinhloko kwe-Apple TV kuzovezwa ku-TV. Uxhuma inethiwekhi ye-TV kunethiwekhi ye-wifi efanayo nefoni yakho, ngokuya ku- Ukusetha > khetha Izilungiselelo ezijwayelekile > khetha Inethiwekhi > khetha inethiwekhi ye-wifi ofuna ukuxhuma kuyo bese ufaka iphasiwedi (uma ikhona) > I-Apple TV isivele ixhumeke kunethiwekhi.
Isinyathelo sesi-3: Kuzilungiselelo ze-Apple TV, khetha i-AirPlay bese Vula iphezulu.
Imibandela yokuxhuma i-TV ku-iPhone nge-AirPlay:
Ucingo iPhone 4 nangaphezulu.
Umabonakude onembobo ye-HDMI.
Isizukulwane sesibili se-Apple TV noma kamuva (eqokiwe Gen 2 noma kamuva).
Qaphela: I-iPhone eyodwa kuphela engaxhunywa ku-TV ngesikhathi.
Xem Thêm 13 ứng dụng xem tivi, truyền hình online phổ biến trên Android tivi | Muasalebang
3Xhuma i-iPhone ku-TV nge-WiFi
Uma usebenzisa idivayisi ye-Apple TV, ukuxhuma i-iPhone yakho ku-TV nge-Wi-Fi kulula kakhulu. Nokho, lokhu kudinga idivayisi yakho ye-Apple TV ukuthi isekele ukusebenza kwe-AirPlay (i-Apple TV Gen 2 noma eyakamuva).
Isinyathelo 1: Udinga ukuxhuma I-Apple TV nge-cable TV I-HDMI. Ku-TV, khetha okokufaka kwedatha ye-TV ngokucindezela inkinobho . UMTHOMBOifindo INPUT noma inkinobho enesithonjana somcibisholo, bese ukhetha ku-TV I-HDMI.
4Ukusebenzisa ikhebula le-HDMI
Lesi isixhumi esibonakalayo sekhwalithi ephezulu yesignali i-Apple esisebenzisa emikhiqizweni yayo ephathwa ngesandla. Izinga le-HDMI livumela okuqukethwe ukuthi kuboniswe ngokulungiswa okugcwele I-HD 720p kuhle I-HD1080p ephelele ngomsindo ogcwele nesithombe, futhi ngesikhathi sokudlulisa, ifoni yakho izoshajwa kalula kakhulu.
I-HDMI ivumela ukudlulisa okuqukethwe kusuka ocingweni kuye ku-TV
Ngemva kokuxhuma i-adaptha embotsheni yokushaja ye-iPhone, uxhuma ekugcineni kwekhebula I-HDMI ku-adaptha, enye indawo ixhunywe ku-TV.
Okulandelayo, khetha umthombo wokufaka ku-TV ngokucindezela inkinobho . UMTHOMBO noma INPUTbese ukhetha I-HDMI kumabonakude. Kusukela lapha umculo, amamuvi noma izithombe ezivulwe ku-iPhone zizoboniswa kumabonakude.
4Sebenzisa uxhumano lwe-Analog (etholakalayo ku-iPhone 3G nangaphezulu)
I-Analog igama elivamile lamachweba I-AV Composite, Izingxenye ze-AV, VGA kumabonakude.
Kuye nge-iPhone yakho kanye nembobo yokuxhuma ku-TV yakho, udinga ukukhetha ukuthenga ikhebula lokuxhuma ngale ndlela elandelayo:
+ iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 4s: sebenzisa ikhebula I-Apple Composite AV noma i-Apple Component AV.
+ Okwemigqa iPhone 5s ngenhla: sebenzisa ikhebula Apple Lightning VGA. Le ntambo ixhumeka kusixhumi sombani futhi ikuvumela ukuthi uxhume embotsheni ye-VGA ku-TV yakho.
Isinyathelo 1: Xhuma ikhebula embotsheni yokushaja ku-iPhone yakho.
Isinyathelo sesi-2: Xhuma ikhebula ku-TV.
+ Okwezintambo Ezihlanganisiwe noma Zengxenye: Kumelwe uxhume umbala ofanele ohambisana nezimbobo ze-TV, kungenjalo ngeke kusebenze.
+ Okwe-VGA: Kumele uqinisekise lokho qiniseka ukuthi ingena kahle embobeni ye-VGAuma ufuna ukukulungisa, kufanele uqinise izikulufi ekupheleni kwekhebula.
Isinyathelo sesi-3: Khetha umthombo wokufaka ku-TV ngokucindezela inkinobho . UMTHOMBO noma INPUTnoma inkinobho enesithonjana somthombo wokufaka inayo umumo womcibisholo kusilawuli kude (kuya nge-TV) > ku-TV khetha VGA noma AV, futhi izithombe, umculo, amavidiyo asuka ku-iPhone azodluliselwa ku-TV.
Sicela ubheke amamodeli we-TV athengiswa e-Dien May XANH:
Ngezindlela ezimbalwa ezilula ezingenhla, ungaxhuma idivayisi yakho ye-Apple ku-TV. Ingabe unazo ezinye izindlela zokuxhumana? Yabelana nawo wonke umuntu esigabeni samazwana ngezansi!
Top 5 điện thoại iPhone 2 mắt (camera) đáng mua nhất 2022 | Muasalebang
Cách nuôi thú trên TouchBar Pets của Macbook Pro cực thú vị | Muasalebang